Somaliland: Xukuumadda Oo Mamnuucday In Aan Dalka Laga Dhisi Karin Masaajid Danbe - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda Oo Mamnuucday In Aan Dalka Laga Dhisi Karin Masaajid Danbe
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, ayaa ka dhawaajiyay inaan masaajid dambe oo dalka laga dhisayaa jiri doonin ilaa wasaarada diinta iyo awqaaftu soo eegto goobta laga dhisayo. Isla markaana wuxuu sheegay in ogolaanso siiso cidda dhisanaysa masaajidka.
Wasiirku wuxuu sidaa ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad loo qabtay furitaanka dhismaha cusub ee masaajidka Saalixiyadda ee magaalada Burco.
Wasiirka oo arrimaha ka hadlay wuxuu yidhi “Waxaan farayaa intii i maqlaysa masaajid danbe oo dalka laga dhisayaa ma jiri doono ilaa wasaaradu soo eegto ama fasax ay siiso mooyaane, sababaha loogu fasaxayaana waxa weeye in masaajidku masaajid kale ka durugsanaado, inuu jamac heli karayo, inuu yahay masaajid ku haboon goobtaa laga dhisayo, oo aan la dul saarin masaajid kale. Markaa ma jiri doono masaajid danbe oo dalka laga dhisayaa”ayuu yidhi Wasiir Khaliil Cabdilaahi Axmed
Si kasteba ha ahaatee amarkan ka soo baxay wasaarada diinta iyo awqaafta ee lagu mamnuucay in masaajid danbe laga dhiso dalka ayaa waxa uu noqonayaa amarkii u horeeyey ee ay soo saarto wasaarada diinta iyo awqaafta Somaliland.
wasaarada diinta iyo awqaafta jsl